Nri oriri nke ị kwesịrị itinye na nri gị Bezzia
Nri oke nri ị kwesịrị itinye n'ime nri gị
Nke Torres | 14/09/2021 20:00 | Ndụmọdụ gbasara ahụike
A bịa na nri na nri, ị nweghị ike ikwu na edere ihe niile. Maka, ọ dabara nke ọma, kwa ụbọchị nyocha ọhụrụ na ọmụmụ metụtara nri na ka ihe ndị a si emetụta anyị n'ime. E gosiputara na ihe niile a na -eri na -emetụta otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Nakwa n'otu nri ụfọdụ na -emerụ ahụike, ndị ọzọ na -amasị ya karịsịa.
Ụfọdụ nri nwere ihe na ihe na -edozi ahụ nke na -enyere aka mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ sie ike. Ihe dị mkpa ka echedo gị pụọ na nje, nje na ụdị ọrịa niile. A na -akpọ nri ndị a "superfoods" ma tinye ha na nri oge niile, nwere ike inyere gị aka ịdị mma, gbasie ike ma chebe gị n'ime.
1 Kedu ihe bụ nri nri
2 Ihe oriri ndị kwesịrị ịdị na nri gị
2.1 Acai tomato
2.2 Chia mkpụrụ
2.3 Techa Matcha
Kedu ihe bụ nri nri
Ọ bụ ezie na ha aghọwo ihe ejiji ruo afọ ole na ole ugbu a, nri nri abụghị ihe ọhụrụ. Ọ bụ karịa, bụ nri nke sobu na nri Mediterranean anyị, dị ka mmanụ olive. Agbanyeghị, na ihe ka ukwuu n'ihe a na -akpọ superfood bụ mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi na nri pụrụ iche, ọ bụ ya mere ha ji bụrụ ihe pụrụ iche na ihe ijuanya nye ọtụtụ mmadụ.
Okwu superfood enweghị ntọala sayensị n'onwe ya, mana a na -anabata ya n'ihi na nkọwa ya bụ ihe ezi uche dị na ya maka ihe oriri na -ada n'ime ndepụta ahụ nwere ohere. Ebe ọ bụ na nnukwu nri bụ nri ọnụ ahịa nri dị elu nke na -enye abamuru ahụike dị ukwuu, dị ka antioxidants, vitamin, ma ọ bụ abụba dị mma.
Ihe oriri ndị kwesịrị ịdị na nri gị
Ndepụta ihe oriri na -agbadawanye ogologo ma na -abawanye, n'ihi na ha bụ ngwaahịa sitere na ịkọ ihe ọkụkụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na -akwado ihe oriri kachasị mma na ahụike. Ugbu a, ekwesịrị icheta na nri naanị enweghị ikike ịkwalite ahụike. Nri dị mma ga -ahazi, dị iche iche na agafeghị oke. Ọ bụrụ na ị gụnyekwara nri nri ndị a, ahụ gị ga -erite uru site na njirimara niile.
Mkpụrụ osisi a yiri blueberry bụ otu n'ime ihe bara uru maka ahụike n'ihi ọdịnaya ya dị elu nke antioxidants. Ọzọkwa, açaí tomato bụ ọgaranya omega 3, 6 na 9 ọdụdụ asịd, amino acid dị mkpa nke ukwuu maka ahụike. N'ime ọtụtụ akụrụngwa ahụike ya, mkpụrụ osisi acai dị mma maka iwusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, megide ọrịa dịka ọrịa kansa na, ha na -ekwu, maka ahụike mmekọahụ.
Ikekwe otu n'ime nri kacha mara amara ebe ọ bụ na mkpụrụ chia na-adịwanye na kichin nke ndị niile na-achọ imezi ahụike ruo afọ ụfọdụ. Ọ bụ mkpụrụ jupụtara n'ihe bara uru nke ukwuu, n'etiti ha, ọ bara ọgaranya na ọdụdụ asịd dị mkpa, calcium, magnesium na ọdịnaya fiber dị elu. Mkpụrụ ndị a bụ dị mma maka nsia n'ụzọ, obi, ọrịa shuga ma ọ bụ cholesterol, n'etiti ndị ọzọ.
Enwere ike ịtụle nri a dị oke mkpa, n'ihi na n'ihi ọtụtụ ihe ọ nwere, ọ bụ otu n'ime uru kachasị maka ahụike. Techa Matcha abụghị ihe ọ bụla karịa ụdị tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ agwakọtara na mmiri, ya bụ, a na -eri akwụkwọ ya niile, ọ bụghị naanị nsị, nke na -agbakwụnye akụrụngwa. Ọgwụ antioxidant dị ike nke na -egbochi ịka nká, n'etiti ọtụtụ uru ahụike ndị ọzọ.
Nke a na-esi ísì ụtọ nke sitere na mgbọrọgwụ nke ezinụlọ ginger, a na-ewere ya dị ka mgbochi mkpali. Ọ dị mma maka obi, ọ bụ mgbochi mkpali, antioxidant ma dị mma na mgbochi na ọgwụgwọ ụdị ọrịa kansa ụfọdụ.
Ndị a bụ ụfọdụ nri nri kacha mkpa ama ama, n'agbanyeghị na ọ bụghị naanị ha. Ọ bụ ezie na ọ dị oke mkpa ka etinyere nri ndị a n'ime nri n'ụzọ ziri ezi. Ebe ọ bụ naanị mgbe ahụ ka enwere ike mezuo akụrụngwa ya na uru ahụike niile. Maka na ọ dị nnukwu mkpa icheta nke ahụ ogidi nke ndụ dị mma bụ nri, mgbatị ahụ na omume dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Ndụmọdụ gbasara ahụike » Nri oke nri ị kwesịrị itinye n'ime nri gị
Gịnị bụ positivism mmekọahụ
Mmega ahụ na agbatị maka olu